Sambany tany Israely no voasakana ny tranonkala filokana amin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Sambany tany Israely no voasakana ny tranonkala filokana amin’ny Aterineto
Voadika ny 07 Mey 2019 3:49 GMT
(Nivoaka tamin'ny 18 Jolay 2010 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Ny volana Jolay 2010, tao anatin’ny tsy firahirahiana tanteraka, dia nisy lahatsoratra iray navoaka tamin’ny filazana fa voalohany teo amin’ny tantarany ny polisy Israeliana no nanome baiko ny mpamatsy tolotra Aterineto (FAI) hanakana ny fidirana amin’ny tranonkalan-tserasera natokana hilokana amin’ny Aterineto. Efa nivoaka tamin’ny teny Hebreo sy ny teny Anglisy ny vaovao, ary nivoaka ihany koa tao amin’ny tranokalan’ny gazety Haaretz sy tao tamin’ny ‘’Globes’’, saingy tsy nisy fanamarihana manokana, eny fa na dia tany amin’ny tranokalam-baovao hafa aza.
Nanome baiko ny mpamatsy tolotra Aterineto rehetra tao amin’ny firenena noho izany ny polisy mba hanakana ny fidirana amin’ny tranonkala maromaro, izay avy any ivelany ny ankamaroan’izy ireo ary ahiahiana ho fananan’ny Israeliana. Anisan’izany ireo tranonkala toy ny : : http://hebrew.vcpoker.com, http://www.victorchandler.com, http://keshcard.com, http://www.stanjames.com sy http://thespinroom.com.
Miantrano ao amin’ny http://www.victorchandler.com ny ankamaroan’ireo tranonkala ireo, (hita amin’ny fiteny maro, anisan’izany ny teny Hebreo) na nifandray mivantana tamin’ny tranonkala. Nanamarika ihany koa ny tranonkala fa misy ny vokatra isankarazany, izay avy amin'ny : VC Casino, VC Live Casino, VC Games ary VC Poker ny URL. Na izany aza, mitondra mankany amin’ny tranonkala http://www.victorchandler.com avokoa ireo pejy ireo.
Nibaiko ireo mpamatsy tolotra Aterineto ny polisy mba hanakana ny adiresy IP an’ireo tranonkala voalaza ireo ao anatin’ny 48 ora. Ho azy ireo kosa, nilaza ny tsy fahafahan’izy ireo manakana ireo adiresy IP ireo ny mpamatsy tolotra Aterineto, ny tsy fananany fahefana hanery ny fanakanana goavana toy izany. Satria, naneho hevitra ireo mpisera amin’ny Aterineto (indrindra fa tany amin’ny sehatra fifanakalozan-kevitra) tamin’ny fanambarana io fepetra io, ary nifanakalo «fika» mba handinganana ny sivana mahazo ireo tranonkala ireo.
Tsy ny fahatongavan’ireo tranonkalan’ny lalao an-tserasera ao Israely ihany no nahatonga ny fihetsik’ireo polisy Israeliana fa noho ny firongatr’ity filokana an-tserasera ity ihany koa.
Telo herinandro talohan’izay, olona miisa 28 no nosamborina fa nanana fifandraisana tamin’ny roa tamin’ireo tranonkala lehibe ireo, dia ny victorchandler.com sy ny stanjames.com satria noheverina fa nizara karatra voaloa vola mialoha mitentina ampolo an-tapitrisany Shekel (vola Israeliana) mba hilokana an-tserasera ao amin’ireo tranonkala ireo izy ireo. Namidy tamin’ny sarany teo anelanelan’ny 100 ka hatramin’ny 5000 Shekel tsirairay ireo karatra ireo. Tsapa ny fitadiavana ny rafitra hafa ho solon'izany ho an’ireo mpiloka ireo taorian’ny fanakanana ny fandoavam-bola tamin’ny alalan’ny karatra fisintonam-bola tamin’ireo tranonkala tamin’ny taona 2007, araka ny baikon’ny polisy. Tamin’ny tapaky ny taona 2009, nanara-maso ny dingana anatiny arahin’ny banky Israeliana amin’ny fampiasana ny karatra fisintonam-bola amin’ny Aterineto ny polisy, ary nanararaotra nampitandrina ireo lehiben’ny banky amin’ny mety hisian’ny hetsika famotsiam-bola avy amin’ny fikambanan-jiolahy amin’ny Aterineto.
Nipoaka ny raharahan’ny filokana an-tserasera tamin’ny tapaky ny volana Novambra 2009, tamin’ny fikarohana natao tany an-tokantranon’ny olona miisa 36 noahiahiana ho mpikambana tao amin’ny tambajotran’ny filokana sy ny lalao an-tserasera miasa amin’ny alalan’ny tranonkala http://bet555.net sy http://betbet.us. Tamin’ny volana Febroary 2010, olona miisa 22 no voampanga ho tao ambadik’ireo tranonkala filokana ireo. Izay no voalohany namoahana fiampangana filokana an-tserasera natao tany Israely.
Nisy raharaha filokana iray hafa nivoaka tamin’ny fiafaran’ny taona 2009. Tao anatin’izany, hita tao anaty cybercafé iray ny milina filalaovana ary azo jeren’ny mpilalao tamin’ny Aterineto tany Isiraely sy tany ivelany. Nanao bemidina tany amin’ireo cybercafé ireo ny polisy ary nisambotra olona miisa 12. Ity no raharaha «Queen Mary»
Andro vitsy talohan’izay, navoaka ampahibemaso ny fanamelohana ny fitantanana ny tambajotra filokana amin’ny Aterineto izay niparitaka nanerana ny firenena, niaraka tamin’ny fananganana ny tranonkala an-jatony amin’ity karazany ity tany Isiraely, teo anelanelan’ny taona 2000 sy ny taona 2002. Voampanga tamin’ny famotsiam-bola sy ny tsy fandoavan-ketra ireo rehetra voakasik’izany.
Ao ambadik'ity fanentanana famongorana filokana tsy ara-dalàna ity, no ahitana indray ny orinasa filokana an-tserasera ara-dalana Isiraeliana dia ny Winner-Toto sy ny National Lottery, ireo roa ireo ihany no afaka manao ara-dalàna ny filokana amin’ny Aterineto ao amin’ny firenena, na dia any ivelan’ny Isiraely aza ny lohamilin’izy ireo. Araka ny voalazan’izy ireo, eo ho eo amin’ny 5 lavitrisa Schekel eo ny hadirin’ny filokana ara-dalàna ao Isiraely, izany hoe eo ho eo amin’ny 1,25 lavitrisa dolara Amerikana eo isan-taona, raha oharina amin'ny sehatra misy ny lalao filokana ara-panatanjahantena tsy ara-dalàna izay mihoatra avo telo heny. Tombanana fa ny fanaovana loka tsy ara-dalàna no loharanom-pidiram-bola ho an’ireo fikambanan-jiolahy any Isiraely.